Fahafatesana mpanakanto :: Nodimandry i Donat Rasamimanana, mpamorona andrarezina • AoRaha
Fahafatesana mpanakanto Nodimandry i Donat Rasamimanana, mpamorona andrarezina
Namoy ny ainy afak’omaly alina, teo amin’ny faha-54 taonany i Donat Rasamimanana, mpanakanto mpamorona andrarezina manana ny lazany sy efa niara-niasa tamina mpanakanto malaza maro. “Efa nanana olana teo amin’ny fahasalaman’ny fo izy tany aloha saingy efa notsaboina izany ary efa sitrana. Tampoka anefa izao fahalasany izao satria tsy narary mihitsy izy fa nandritra ny alina, tamin’izy natory no tsy tafafoha tao am-pandriana intsony”, araka ny fanazavan’i Sitraka Rasamimanana, zanany vavy.
Ao amin’ny tranony, etsy Andrefan’Ambohijanahary no andrasana ny razana ka amin’ny zoma amin’ny 12 ora antoandro no hoentina hatao veloma farany any amin’ny fiango­nana Notre Dame de Fatima, eny Ambohimirary, mialoha ny handevenana azy any Ambohidavenona, any Ambohimangakely. “Tsy manakana ireo mpankafy sy mpanakanto te hanotrona ny fianakaviana amin’izao zava-mitranga izao fa mahafaly anay ny fahatongavanareo”, hoy hatrany ny zanany vavy.
Tsy zovina amin’ny mpankafy intsony ny talenta maroloko nananan’i Donat Rasamimanana satria sady mpitendry mahafehy zavamaneno maro izy no mpamoron-kira ikoizana ihany koa. Sanganasa malaza maro izay noforoniny no efa nohiraina mpanakanto hafa. Ohatra amin’izany ny “Mila anao”, izay efa noventesin-dry Titi sy Paris, tao koa ny fiaraha-miasany tamin’i Zinnia tao anatin’ilay hira mitondra ny lohateny hoe: “Te ho roa”, sy ny sisa. Izahay eto amin’ny Ao Raha dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ireo mpanakanto notezainy.
Fandikan-dalàna tamin’ny zotra D :: Mihatra ny sazy ho an’ireo mpamily sy tompona fiara taksibe